Fitaovana ho an'ny famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Ny ankamaroan'ny mpamorona sary dia manana zavatra maromaro iraisana, ary ireo no fitaovana ampiasainy. Ny fahombiazan'ny mpamorona sary dia hiankina betsaka amin'ny lalao azony avy amin'ireo fitaovana sy fahalalana rehetra ireo.
Mety tsy ny fitaovana no mahatonga ny mpamorona sary ho mahafinaritra, fa izy ireo. Hanampy anao amin'ny lalanao ho matihanina tsara izy ireo. Nanangona fitaovana ilaina 8 ilain'ny mpamorona sary izahay.
1 Fitaovana 8 ho an'ny famolavolana sary
1.2 Endrika mafy
1.3 Pensily sy taratasy
1.4 Telefaona iray
1.6 portfolio iray
1.8 Tontolo iasana mahazo aina
Fitaovana 8 ho an'ny famolavolana sary
Ny fitaovana ilain'ny mpamorona sary dia miovaova arakaraka ny fari-piainana maro, na ny fomba fiasan'izy ireo izany na ny tontolo iainany. Fa matetika Ireo fitaovana asehonay aminao etsy ambany ireo no andry fototra mba hahafahanao mampivelatra ny asanao sy mitombo hatrany.
Iray amin'ireo fitaovana manana lanja bebe kokoa amin'ity taranja ity izy io, satria ny ampahany amin'ny sary dia manondro ireo fitaovana nomerika, na ordinateur na tablette. Raha ny modely amin'ny solosaina dia miovaova arakaraka ny tsiron'ny olona tsirairay, na Apple na marika hafa dia manana solosaina matanjaka afaka miasa amin'ny fitaovana famolavolana. Fantaro hoe inona marina no ilainao sy izay tianao hananana ny solosainao. Miankina amin'ny rindrambaiko, fitaovana ary loharano izany.
Na dia tena zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny asa aza ny solosaina ho an'ity taranja ity, Izy io koa dia hanampy anao amin'ny sehatry ny fikarohana sy fanabeazana. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa an'io fitaovana io mba hikaroka ny asan'ny mpamorona hafa, na ho fanondroana na ho fifaninanana. Ho fanampin'izany, amin'ny Internet dia hahita taranja marobe izay ahafahanao mampitombo ny fahaizanao.
Ny rindrambaiko famolavolana matetika dia maka toerana malalaka amin'ny solosainao. Amin'izany dia tsy maintsy ampidirinao ny asa rehetra ataonao, izay matetika manana ampahany manan-danja hafa amin'ny fitahirizana ny solosainao. Amin'ity dia tiako ny milaza aminao fa manana kapila mafy ivelany, Hanampy anao hanala ny solosaina amin'ny asa izay mety haharitra ela ary tsy dia ilaina loatra. Tena ilaina koa ny manao dika mitovy amin'ireo tetikasa voalaza ireo na raha te hitazona azy ireo ho fahatsiarovana fotsiny ianao. Arakaraka ny fitahirizana bebe kokoa ananan'ny solosainao no tsara kokoa ny fahombiazany.
Pensily sy taratasy
Miankina amin'ny mpamorona angatahinao, dia hilaza aminao izy ireo fa ny fitaovana fanohanan'izy ireo dia ny solosaina na taratasy. Efa nohazavaiko taminareo teo aloha ny maha zava-dehibe ny fananana solosaina tsara. Fa ny taratasy dia mbola fanohanana lehibe. Na dia manana ny fanaraha-maso Z malaza aza ny solosaina, Ny fanaovana sary intuitive dia ahafahanao manome fahafahana bebe kokoa amin'ny hevitra mipoitra. Indraindray, ny fampiasana fitaovana elektronika dia mahatonga antsika ho tototry ny farany ary tsy afaka mandroso amin'ny hevitray. Noho izany, tsara ny miverina amin'ny fomba nentim-paharazana. Ny fanaovana sary amin'ny taratasy sy pensilihazo dia hanome anao fahalalahana bebe kokoa.
Mety ho gaga ianao raha milaza aho fa zava-dehibe ho an'ny mpamorona sary ny telefaona. Fa ity fitaovana ity dia fomba haingana kokoa hifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny mpamorona hafa. KOA Hanampy anao handamina sy hahazo aingam-panahy izany, satria amin'izao fotoana izao dia tsy fahita firy ny tranokala tsy manana fampiharana finday. Ny pejy toa an'i Behance, Pinterest na Instagram dia loharanom-panentanana lehibe.
Ny fakana sary amin'ny fotoana sasany dia ho loharanon'ny aingam-panahy ihany koa, misy fotoana tsy manam-potoana hitazomana hevitra, ary ny fakana an'io fotoana io dia hanampy antsika hamelombelona azy any aoriana. Raha mahita typography, endrika na zavatra tianao ianao dia fotoana tsara hakana sary. Angamba io voninkazo io izay toa tena nanaitra tamin'ny voalohany, dia hanampy anao amin'ny famoronana palette loko ampiasaina amin'ny tetikasanao.
Loharanom-pahalalana lehibe ny boky, satria tsy ny rehetra no voasoratra ao amin'ny Internet. Ilaina ny mamaky sy mandinika ary mianatra isaky ny misy fahafahana. Mety hahita fahalalana be dia be ianao amin'ny boky, torolalana ary lahatsoratra nosoratan'ireo matihanina hafa amin'ity sehatra ity. Ity misy rohy mankany amin'ny lahatsoratra momba ny boky izay tsy azon'ny mpamorona sary tsy mitsahatra mividy. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka manitatra ny anao fahalalana sy saina ho mpamorona sary.
Un seranan-tsamboafolio es una coleiccON de trabajos de tenaizamos a lo lehibeo do tiempo, amin'ny el mba hanehoana ny fahafahantsika, ny fahaizantsika ary ny traikefantsika. Es una irayvanim-potoana de I koaATSINANANArar tus habillyidveloma a ny mpanjifaes, en la tenaidad esto es muy zava-dehibee, la hifaninanahihy es Grande y Las olonaas seleccIonan quok AMIN'Ifehezinao y quok tsy misy, en base a ny trabajos de manana tenaizado. Es muy zava-dehibee tener una buena imagen y un buen portfolio-, esto te ayudará a de la gfikambanana crea en ti, te de confIanaza y te quMandehana AMIN'Imandroaka.
Para hAcer tonga lafatra tokes de tener en cuandefasa enta diaias Kosyace. Te RecOMIendo de te fijes betsakao en ny seranan-tsambofoliOS de ny dia ataovy hoe:ñadvavaka, leer ny lahatsoratray amin'ny H owo hAcer un buen portfolio-, for tener hevitra y amin'nyocer albasyos trucos. Para hAcer Uno mila izany ianao una págao anatin'ny Malagasy, es una irayvanim-potoana tena manaitra ny I koaATSINANANArar tu trabTongolo gasy.
Ho an'ny mpamorona, ny fanabeazana dia tsy izay azonao rehefa eo amin'ny asa na diplaoma ianao. Fa amin'ny fomba hafa hanohizana ny fianarana sy ny fivoarana. Ireo endrika fianarana ireo dia mety ho fampianarana an-tserasera izay mamita ny fiofananao na fampianarana momba ny rindrambaiko, satria ireo farany dia havaozina matetika. Ny fanavaozam-baovao dia hahatonga ny fizotranao sy ny fahaiza-manaonao amin'ny alàlan'ny fitaovana fandrafetana ho malefaka kokoa.
Tontolo iasana mahazo aina
Ny asa rehetra dia tsy maintsy manana toerana ahafahanao miasa am-pilaminana sy mazoto. Momba ny a singa tena manan-danja ho an'ny fahombiazana sy ny famokarana mba hivoatra. Ny tontolon'ny asanao dia tokony ho toerana misy hazavana sy habaka be. Tsara ny manana varavarankely lehibe sy zavamaniry. Ny fananana birao lehibe dia hahatonga anao ho mora kokoa amin'ny fametrahana ny fitaovana rehetra ilainao. Na milamina na tsia ny birao dia miankina aminao izany.
Misy olona miasa tsara kokoa amin'ny toeram-piasany mikorontana na dia toa tsy mampino aza izany. Tsara ihany koa fa ny loko izay mibahana ao amin'io habaka io dia manaitra sy mazava, raha mpamorona sary ianao dia ho tonga amin'ny daty miaraka amin'ny Teôria ny loko.
Fantatrao izao ny zavatra ilain'ny mpamorona sary mba hampivelatra ny asany. Miaraka amin'ny faharetana sy ny fampiasana ireo fitaovana ireo amin'ny famolavolana sary, azo antoka fa ho lasa mpamorona na mpamorona sary ianao. mialoha!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Fitaovana ho an'ny famolavolana sary